ဘာကြောင့် Type 1 collagen သောက်သုံး လာကြတာလဲ? | OnDoctor
ဘာကြောင့် Type 1 collagen သောက်သုံး လာကြတာလဲ?
ကော်လာဂျင် Collagen ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပေါများဆုံး ပရိုတင်း တစ်မျိုးပါ။ မိတ်ဆွေတို့ နေ့စဉ်စားသုံးလိုက်တဲ့ ပရိုတင်းတွေကို အဆင့်ဆင့် ဖြိုခွဲလိုက်ရင် collagen လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ amino acid တွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီ amino acid တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိပြီးသား amino acid တွေပေါင်းပြီး ဝိုင်ဖောက်တံလို chain တွယ်ဆက်ပေးသောကြိုးသုံးမျိုး ယှက်လိမ်နေတဲ့ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးကပဲ collagen တွေကို ကျစ်လစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တည်ဆောက်ရာမှာ ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်စေပါတယ်။
Collagen အမျိုးအစား များစွာရှိတဲ့ အထဲက Type 1 collagen ဆိုတာ ဘာလဲ?
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ collagenတွေရဲ့ 90 % ဟာ type 1 ဖြစ်ပါတယ်။ Type 1 အများဆုံး (95 %) ကို အရိုးတွေမှာ တွေ့ရပြီးတော့ COL1A1 လို့ခေါ်တဲ့ ဗီဇ Gene ပါဝင်မှုကလဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Type 1 collagen ပြုလုပ်ရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။
Type 1 collagen ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြား၊ အရိုး၊ အရွတ်၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ သွေးကြောနံရံတွေနဲ့ တွယ်ဆက်တစ်ရှူး အသားမျှင်တို့ တည်ဆောက်ရာမှာ စတီးချောင်းတွေ ကွန်ကရစ်လောင်းထားတဲ့ ငြမ်းသဖွယ် ထောက်တိုင်အဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခြင်း၊
ဆံပင်ပါး၊ ဆံပင်ကျွတ်သူ၊ ထိပ်ပြောင်သူများ အတွက် နက်မှောင်သန်စွမ်းသော ဆံကေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း
လက်သည်း ခြေသည်းများ မွဲခြောက်ခြောက် မဖြစ်ဘဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေခြင်း
elastin ထွက်လို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူတွေမှာ အနာကျက်မြန်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ ပိုမို၍ ပြန်လည် သက်သာလာစေခြင်း
နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ type 1 collagen ကို လူတွေသုံးစွဲတာ အများဆုံး ဖြစ်စေတာကတော့ အရေပြားပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေ၊ အသားအရေ တွဲကျနေတာတွေကို ပြန်လည် တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်အောင်၊ အရွယ်တင်နုပျို ကျန်းမာစေအောင်၊ အသားအရေ စိုပြေမှုကိုအားပေးတဲ့ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Type 1 collagen ကို ဘယ်ကရနိုင်မလဲ?
Collagen တည်ဆောက်ရာမှာ အသေးစိတ်ကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စားလိုက်တဲ့ အစာအာဟာရတွေထဲက ထုတ်ယူတဲ့ lysine ပါတဲ့ essential amino acid နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သကြားဓာတ်ပေါ် အခြေခံထုတ်လုပ်တဲ့ non essential amino acid တွေဟာ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။
Lysine ပါတဲ့ essential amino acid ကို ရချင်ရင် ဘာတွေ စားပေးရမလဲ?
အနီရောင်ရှိတဲ့ အသား၊ ငါး၊ အရိုးပြုတ်ရည်
gelatin ပရိုတင်းဓာတ် ပါတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ
နို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း
ကြက်ဥ၊ ပဲ နဲ့ ပဲပိစပ်
Vitamin C ပါတဲ့ အစားအစာတွေ
Zinc ပါဝင်တဲ့ အခွံမာခရု၊ အစေ့အဆံ နဲ့ မြေပဲ တို့ စားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Type 1 collagen ဖြည့်စွက်သောက်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ?
အသက် ( ၂၅ )နှစ် နောက်ပိုင်းက စပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ Collagen ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာတာ ဖြစ်လို့ အစာစားရုံနဲ့ collagen လိုအပ်ချက်တွေ မပြည့်မီတော့တဲ့ အခါ ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် ကျန်းမာရေး အတွက် သောက်သုံးသင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက collagen မသောက်သင့်ဘူးလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ ကလေးများနှင့် collagen သောက်ရင်း ဓာတ်မတည့်ဖြစ်သူများ၊ ရောဂါအခံရှိသူများအနေဖြင့် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
နုပျိုမှုတွေ အချိန်နှင့်အမျှမွေးဖွားနေဖို့ Collagen ပမာဏ 300mg ပါဝင်သော Red snapper (ခေါ်) ငါးပါးနီမှထုတ်လုပ်ထားသည့် Type I Collagen အမျိုးအစားဖြစ်သော LAC Taut Radiance Premium Collagen ကိုသောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် အသားအရောင်မညီညာခြင်း၊ နေလောင်ဒဏ်နှင့် အရေးအကြောင်းများကိုကာကွယ်ပေးပြီး အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Type I Collagen ကောင်းကောင်းရှာဖွေနေသူတွေအနေနဲ့ LAC Taut Radiance Premium Collagen ကိုရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
Author : Dr. Yee Mon
အမျိုးသမီးတို့ ရင်သားခွဲစိတ် ပြုပြင်ဖို့ စဉ်းစားထားလျှင် ဒီအချက်တွေကို အရင်ဖတ်ပါ
အာလူး အာဟာရများနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စုအကြောင်း
သံဓာတ် အဓိက အမျိုးအစား (၂)ခုအကြောင်း
မင်းဂွတ်သီးနဲ့ သကြား တူတူစားလို့ရသလား?
ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံအတွက် ကြွက်သားအားနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတက်လာဖို့ ပရိုတင်း ရင်းမြစ်တွေနဲ့အတူ သိပ္ပံနည်းကျ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ကြည့်ခြင်း